Valan-javaboary Timanfaya any Lanzarote | Vaovao momba ny dia
Susana Garcia | | nosy, Lanzarote
El Valan-javaboary Timanfaya Any amin'ny nosy Lanzarote no misy azy. Ity valan-javaboary voajanahary ity dia miavaka amin'ny fiavian'ny volkano, noho izany dia faritra tsy dia misy mponina izy io nefa lasa toerana misy lanja biolojika be dia be izay misy karazan-javaboary nifanaraka tamin'ity tontolo ity.
Androany ity zaridaina ity dia iray amin'ireo faritra mpizahatany sy fitsidihana indrindra ao amin'ny nosy Lanzarote any amin'ny Nosy Canary. Tsy isalasalana fa tsy manam-paharoa ny tontolon'ny volkano ary afaka manao hetsika ao amin'ny valan-javaboary ianao. Ho fantatsika ny niandohany sy ny mampiavaka azy, ary koa ny fomba hankafizana ity valan-javaboary ity.
1 Ny niandohan'ny faritra volkano
2 Ahoana no namoronana ny valan-javaboary Timanfaya
3 Fampahalalana azo ampiharina
4 Fire Mountains-Hilario Islet
5 Làlan'ny Volkano
6 Hady rameva
Ny niandohan'ny faritra volkano
El 1 septambra 1730 dia nanomboka ny fipoahana volkanika izay hiteraka io faritra geolojika liana be io. Nanomboka tamin'ity taona ity ka hatramin'ny 1736 dia nisy andiana fipoahana izay nahatonga ireo rafitra geomorpholojika izay liana tokoa handalina volkano. Ao amin'io faritra midadasika manarona maherin'ny 50 kilometatra io dia misy volkano 25 mahery, na dia ny hetsika farany nitranga tao amin'ilay faritra aza dia tamin'ny 1824.
Ahoana no namoronana ny valan-javaboary Timanfaya
El sarobidy ara-jeolojika sy voajanahary amin'ity faritra ity dia nahatonga azy io nambara ho Valam-pirenena tamin'ny alàlan'ny didim-panjakana tamin'ny 1974. Nanomboka ny politikam-panjakan'ny fiarovana ity faritra ity mba hisorohana ny fitrandrahana azy sy hifehezana ny fidirana amin'ny habakabaka, ka izany dia toerana anaovana fandinihana sy fiarovana ny tontolo iainana. . Ho an'ity tanjona ity dia natsangana ny Lalànan'ny habaka voajanahary nosy Canary, izay nanolotra rafitra ara-dalàna ho an'ny fiarovana ireo faritra ireo. Ny nosy Lanzarote koa dia nambaran'ny UNESCO ho Biosfir Reserve tamin'ny taona 1993.
Fampahalalana azo ampiharina
toerana sokafy isan'andro manomboka amin'ny 9:00 maraina ka hatramin'ny 17:45 hariva. ora, ny fitsidihana farany tamin'ny 17:00. Amin'ny fahavaratra dia adiny iray fanampiny izy, hatramin'ny 18:45 hariva. Tsy maintsy dinihina ny taha satria mety misy fiovana eo amin'ny vidiny. Ny zava-dehibe dia ny tsy ahafahanao mandoa amin'ny karatra ara-dalàna, ka tsara kokoa ny mitondra ny vola amin'ny vola.
Amin'ny maha-torohevitra antsika dia tsy maintsy milaza isika fa tsara kokoa mitsidika ny valan-javaboary voalohany amin'ny marainaHatramin'ny folo ora dia manomboka mafana be izy io ary mety hanimba ny zaza na ny be antitra. Aleo foana misafidy ny ora voalohany na ora farany.
Ao amin'ity valan-javaboary ity dia tsy misy trano itoerana, koa raha te handany mihoatra ny iray andro isika dia tsy maintsy mitady izany any amin'ireo tanàna akaiky toa an'i Yaiza. Misy trano fisakafoanana ao amin'ny valan-javaboary mendrika hitsidika, El Diablo, na dia tsy misy faritra fitsangatsanganana voatondro aza. ATSINANANA trano fisakafoanana dia eo amin'ny Islote Hilario ary toerana tena mahaliana izy io. Manolotra habaka boribory misy varavarankely lehibe izy io amin'izay ny fisakafoanana dia afaka mahita fomba mahaliana momba ny valan-javaboary amin'ny teboka maro.
Rehefa mitsidika ny valan-javaboary ianao dia mila mahafantatra ny sasany amin'ireo lalàna, na dia mitombina ihany aza. Tsy afaka mivezivezy amin'ny toerana tsy misy marika ianao. Ny fiara tsy maintsy avela amin'ny toerana nahazo alalana. Tsy azo manakorontana ny biby sady tsy mitondra azy ireo hiala ny valan-javaboary ary tsy afaka ampidirina karazana biby na zavamaniry hafa. Tsy afaka manao fiaramanidina modely na langidina manidina any amin'ilay faritra ianao. Tsy azo atao koa ny mihaza, manao afo na manao varotra eny an-dalambe. Fantatsika fa amin'ny sehatra voajanahary dia tsy maintsy manaja izay rehetra hitantsika isika mba hitazomana azy amin'ny toe-javatra tsara indrindra.
Tsy tsara koa ny mandeha irery ao amin'ny valan-javaboary. Misy làlana maromaro mifehy mba hahafahan'ireo mpizahatany mandeha an-tongotra. Fa tsy maintsy mandeha miaraka amin'ny akanjo sy kiraro mety foana ianao ary mitondra satroka sy rano hodiovina, satria tsy misy toerana fialofana.
Fire Mountains-Hilario Islet
Ao amin'ny Ivotoerana ara-kolontsaina sy mpizahatany an'ny tendrombohitra afo no ahitanao ireo trangan-javatra mahaliana indrindra. Inland no Islote de Hilario, izay afaka mahita ny geyser ianao, anomaly geothermal izay mahatonga ny tany hamoaka ny rano mangotraka amin'ny tsindry mafy. Tsy isalasalana fa ity no iray amin'ireo fialamboly tsara indrindra ho an'ny mpizahatany.
Ao amin'ny Islote de Hilario no misy ny lalana manomboka ny fanaovana ny Route of the Volcanoes amin'ny bus, izay antsoina hoe bus any. Izy ireo dia 14 kilometatra mifehy amin'ny alàlan'ny faritra lehibe niavian'ny fipoahana. Ity dia an-tongotra hijery ny faritra ity dia maharitra antsasak'adiny.
Raha mandeha any amin'ny valan-javaboary ianao ianao dia te-hanandrana izany fomba fitaterana izany tena tsy mahazatra. Nanjary iray amin'ny sary mahazatra indrindra rehefa mitsidika ny nosy. Mila mandeha aloha ianao, satria maro ny mpizahatany te-hitsangatsangana amin'ny alàlan'ny biby volkanika toy izany. Ho an'ireo mampiavaka rehetra ireo dia io park io no iray amin'ireo mpitsidika indrindra an'i Espana rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » nosy » Valan-javaboary Timanfaya
London Eye, ilaina any London